Kacsi la’aan ma iska daaweyn lahayd -qaab Fudud naga baro - iftineducation.com
Kacsi la’aan ma iska daaweyn lahayd -qaab Fudud naga baro
iftineducation.com – Daraasad cusub ayaa soo jeedisay in laga yaabo rag badan ay ka bogsadaan howlgabka kacsiga hadii ay hagaajiyaan qaab noolaleedkooda cunooyin wanaagsana ay cunaan.
Howlgabka kacsiga labo nooc ayaa ugu wayn kuwaasoo kala ah: Erectile Dysfunction (ED) Kacsi la’aanta iyoPremature Ejaculation (PE) Biya-baxa dagdagga ah. Daraasadaan waxay diirada saartay nooca kacsi la’aanta.
Daawoyin fara badan oo loo adeegsado kacsi la’aanta ayaa suuqa soo galay kadib markii ay bilaabatay daawada Viagra, balse daraasadaan cusub raggii lagu sameeyay 29% way ka bogsadeen kacsi la’aantii iyagoo wax daawo ah aan isticmaalin kadib markii ay wax ka badaleen qaab noolaleedkooda.
Khubarada daraasadaan samaysay ayaa waxaa hogaaminayay Professor Gary Wittert, oo ah madaxa qeybta caafimaadka ee jaamacada Adelaide ee ku taala dalka Australia.
Ragga dhibaatada kacsi la’aanta qaba ayaa lagula taliyay inay hagaajiyaan qaab noolaleedkooda sida, inay miisaankooda ka taxadaraan, inay cunaan cunto nafaqo leh, inay ka fogaadaan maandoriyeyaasha sida khariga iwm, inay hurdo fiican seexdaan habeenkii, inay badiyaan jimicsiga iyo sidoo kale inay wax ka qabtaan hadii ay qabaan cudurada sonkorowga, dhiig karka iyo kolestaroolka.
Daawo Sawirada Kulan ay lahaayeen Baarlamaanka Kenya oo Fowdo ay hareesay iyo Xildhibaano Gacmaha iskula tagay
Daawo fanaanada caanka ah ikraan caraale oo dhex dhexaad ka noqotay Hargaysa iyo muqdisho soona qaaday hees duco ah